Amakhorali aseHawaii asengozini yokunyamalala ekufudumaleni komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amakhorali angenye yezinto eziphilayo ezisengozini enkulu yokushisa komhlaba: njengoba izinga lokushisa kwezilwandle landa, zona banezinkinga eziningi zokuqhubeka nokukhula ngenxa yokwehla kwe-calcium, amaminerali abalulekile ekwakhekeni kwawo.
Kubhulogi sikhulume kabanzi ngesimo se- IGreat Barrier Reef yase-AustraliaKepha amakhorali aseHawaii angcono kakhulu. Abaphenyi baseCoral Reef Ecology Laboratory, eHawaii Institute of Marine Biology babhale i- isiqephu sesithathu sokuphuma kwamakhandlela eHanauma Bay Nature Reserve, esiqhingini i-Oahu.
Lapho izinga lokushisa kolwandle likhuphuka, lidala ukuthi ulwandle lube ne-asidi eningi. Amakhorali ayizinto eziphilayo ezigcina ubudlelwane be-symbiotic ne-algae: ngenkathi lezi zitshalo zinikeza i-nitrogen, ukudla abakudingayo ukuze bakhule, amakhorali avikela lezi zidalwa ze-photosynthetic; Noma kunjalo, ngenxa yokushisa komhlaba ulwelwe lushiya amakhorali. Ngokwenza njalo, kancane kancane bayazenza buthaka, zibe mhlophe zize zigcine zife, nokuyinto eyenzekile ku-9,8% walabo abaseHanauma Bay Nature Reserve phakathi konyaka wezi-2014 nowezi-2015.
Ngenkathi kwenziwe imizamo yokuvikela lesi simiso semvelo esibalulekile, abacwaningi baqaphela ukuthi uma ukufudumala kwembulunga yonke kuqhubeka, izilwandle zizoqhubeka nokumunca inani elikhulu lesikhutha futhi ngaleyo ndlela izixhobo zamakhorali kule ngxenye yomhlaba nazo zizohlala zisengozini enkulu yokunyamalala. Uma lokhu kwenzeka, kungenzeka ukuthi izivakashi eziyizigidi ezihambela le ndawo unyaka nonyaka zizolubona ushintsho; Noma kungezona kuphela, kepha futhi nezinhlobonhlobo ezinkulu zezilwane zasolwandle ezihlala lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amakhorali aseHawaii asengozini yokunyamalala ekufudumaleni komhlaba